တရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအဆောက်အဦပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်၌ လူ ၅၃ ဦးသေဆုံး - Xinhua News Agency
ဟူနန်၊ မေ ၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဟူနန်ပြည်နယ်တွင် ကိုယ်တိုင်ဆောက်လုပ်ထားသည့်လူနေအဆောက်အဦတစ်ခု ပြိုကျမှုဖြစ်စဉ်အတွင်း စုစုပေါင်း လူ ၅၃ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း မေ ၆ ရက်တွင်ကျင်းပခဲ့သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ၌ အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်အတွင်း လူပေါင်း ၁၀ ဦးကို ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း အာဏာပိုင်များက ဆိုသည်။အဆောက်အဦပြိုကျမှုမှာ တရုတ်နိုင်ငံ ဟူနန်ပြည်နယ်မြို့တော် ချန်းရှ ရှိ ဝမ်ချန်းခရိုင်တွင်ဧပြီ ၂၉ ရက်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆင်ဟွာသတင်းထောက်များက တရုတ်နိုင်ငံ ချန်းရှ မှသတင်းပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ (Xinhua)
According toapress conference held on Friday,atotal of 53 people have been confirmed dead inaself-built residential structure collapse in central China’s Hunan Province.
Officials said, 10 people have been rescued.
Xinhua News Agency correspondents reporting from Changsha, China.